विद्युतीय शासन । ई-गभर्नेन्स (E-Governance) भनेको के हो ?
अगस्ट 7, 2018 अगस्ट 7, 2018 साइन्स इन्फोटेक	2 Comments ई-गभर्नेन्स
नयाँ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिहरू (आईसीटी)को आगमनसंगै हाम्रो सूचना सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया र वितरण क्षमता बढाएको छ। आफ्नो राष्ट्रिय विकास योजना तयार गर्दा लगभग सबै विकासोन्मुख देशहरूले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिहरू (आईसीटी)लाई महत्व दिने गरेका छन् । बिशेषगरी सु-शासनको खोजमा आईसीटीको प्रयोगले महत्वपुर्ण स्थान प्राप्त गरेको छ, जसलाई सामान्यतया विद्युतीय-शासन भनिन्छ । विद्युतीय-शासन भनेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरेर सरकारले सेवाग्राही अर्थात नागरिक र ब्यवसायमा पुर्याउने सेवाको गुणात्माक अभिबृद्धि हो । विकसित राष्ट्रहरुमा प्राय: सरकारले नागरिकहरूलाई सेवाहरू वितरण गर्नका साथै आफ्नो आन्तरिक कार्यहरु गर्न आईटीको कार्यान्वयन गर्ने गर्छन ।
← विद्युतीय गाउँ/ई-भिलेज (E-Village) भनेको के हो ?
पुरुषको घाँटीमा मात्र रुद्रघण्टी किन हुन्छ ? →
2 thoughts on “विद्युतीय शासन।ई-गभर्नेन्स (E-Governance) भनेको के हो ?”